မုန်တိုင်းများ၏အရှင်သခင်Season (2)အပိုင်း (50) - ဇာတ်သိမ်း - May King - Wattpad
မုန်တိုင်းများ၏အရှင်သခင်Season (2)အပိုင်း (50) - ဇာတ်သိမ်း
3.8K Reads 138 Votes 1 Part Story
By MayKingMK119 Completed
Written By- May King
အချစ်ဘုရင် စစ်ဘုရင် မွန်ဂိုဘုရင် တင်တက်ရင် နဲ့ တိုင်းပြည်၊လူမျိုးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ နှင်းမြို့တော်သား ကမာအာဇမန်တို့ကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ တချို့အချစ်တွေက စစ်မှန်ပေမယ့် ပေါင်းဖက်ဖို့မလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံး ဘယ်လိုကြံ့ကြံ့ခံပြီး အခက်ခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းက ပြောပြသွားမှာပါ။
Get notified when မုန်တိုင်းများ၏အရှင်သခင်Season (2)အပိုင်း (50) - ဇာတ်သိမ်း is updated
#4 in king See all rankings
71.1K 6.8K 669
ဘဝကို​ပျော်​​ပျော်​ပါးပါးဖြတ်​သန်းလို့ရမယ်​လို့ ဝူရိဖန်​ထင်​ခဲ့တယ်​။ ငယ်​ရွယ်​တုန်း​လေးစိတ်​ကြိုက်​​ပျော်​ပါးပြီး တစ်​​နေ့​တော့သင့်တော်​တဲ့မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့လက်​ဆက်​မှာ​ပေါ့။ ဒါပါပဲ သူ့ဘဝကြီးက​မွေးဖွားလာ၊မျိူးဆက်​ဖြန့်​ပွား၊​သေဆုံးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်​သွားမှာ။ ဒါ​ပေမယ့်​ဘယ်​သူသိမှာလဲ ကဗျာ​တွေစာ​တွေမနှစ်​သက်​တဲ့သူက ကဗျာ​တွေထဲကလိုအချစ်​နဲ့ဆုံ​တွေ့ရမယ်​လို့​ပေါ့။ အဲ့ဒီသူကလည်းသာမန်​မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​မဟုတ်​ပါပဲ။ အတ္တ​တွေရန်​ငြိုး​တွေအကြံအစည်​​တွေနဲ့ ​လောကစည်းစိမ်​ကိုတပ်​မက်​​နေတဲ့​ယောက်ျားတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေခဲ့တာပဲ။
"အသင့်​ရဲ့မက်​မွန်​ပင်​​အောက်​ကိုကျွနိုပ်​လာခဲ့တယ်​ မက်​မွန်းကျွန်းသခင်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ အသင်​စံမြန်းရာ
44.1K 4.3K 245
ဒီ fic က ပထမဆုံးစ​ရေးတဲ့ fic ​လေးပါ။
သမိုင်း​ကြောင်းကို အ​ခြေခံထား​ပေမဲ့ စိတ်​ကူးရင်​သာဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒီ fic ထဲကစကားလုံးများ ဟာ စာ​ရေးသူရဲ့ စိတ်​ကူးများသာဖြစ်​ပါတယ်​။
ထူခြားတဲ့ ဇာတာကိုပိုင်​ဆိုင်​တဲ့​ကောင်​က​လေး soko
တစ်​မူထူးခြားတဲ့အလှပိုင်​ရှင်​ကိုမှကြိုက်​ချင်​တဲ့ han nay
*            *            *             *             *
♡DragonGod's Babyboo♡ EDITED
193K 3.1K 199
Falling Snow Turns White
61.1K 6K 172
Translation to Burmese
Original Author : Tu Zi
Translator & Rewriter : Hanashiro Yuzuki
Full Credit to Origin
When, you leave.... I will die (My King S-2)
6.2K 342 14
Light Season 2
69.7K 3.9K 22
Light Season2လေးလာပါပြီ
This is original fic.
73.7K 5.4K 94
Ogre ဘီလူးမျိုးနွယ်ဝင် ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့် လူသားကောင်လေးတို့၏ ချစ်ခရီးလမ်းကလေး သာယာဖြောင့်ဖြူးနိုင်ပါမည်လော???
Dew      ••• ogre မျိုးနွယ်ဝင် ပန်းစား ဘီလူး
Zephyr ••• လူ
Gale      ••• ogre မျိုးနွယ်ဝင် အသားစားဘီလူး
Hazy     ••• ogre မျိုးနွယ်ဝင် အသားစားဘီလူး
Please read me 😍
66.7K 6.3K 420
Light Season (1)
74.8K 5.6K 32
Light Season 1
ချောမောခန့်ညားတဲ့ ရန်ကျောက်ရိ နဲ့ တိုင်းတပါးရဲ့ မိန်းကလေး တမျှချောလှပြီး ရတနာတပါးဖြစ်တဲ့ ၀ူချီလင်းတို့တွေ့ဆုံ မိတော့ ...